Vaovao - Tantaran'ny milina fanaovana hazo
Tantaran'ny milina fanaovana hazo
Ny milina fanaovana hazo dia karazana fitaovana milina ampiasaina amin'ny fizotry ny asa hazo mba hikarakarana ireo vokatra vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo ho vokatra vita amin'ny hazo. Ny fitaovana mahazatra amin'ny milina fanaovana hazo dia ny milina fanaovana hazo.
Ny tanjon'ny milina fanaovana hazo dia hazo. Wood no fahitana voalohany indrindra nataon'ny olombelona sy fampiasana akora, ary fiainana maha-olombelona, ​​mandeha an-tongotra, misy fifandraisana akaiky. Ny olombelona dia nanangona traikefa be dia be tamin'ny fanodinana hazo nandritra ny fotoana ela. Fitaovana milina fanaovana vatan-kazo dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fomba fanaon'ny olona maharitra famokarana, fahitana tsy tapaka, fizahana hatrany ary famoronana mitohy.
Tamin'ny andro taloha, ny mpiasa miasa dia namorona sy nampiasa fitaovana fanaovana hazo isan-karazany nandritra ny asa famokarana maharitra. Ny fitaovana fanaovana hazo voalohany indrindra dia ny tsofa. Araka ny firaketana ara-tantara, ny "tsofa varahina Shang sy Zhou" voalohany dia natao nandritra ny tarana-mpanjaka Shang sy Western Zhou, 3 000 taona mahery lasa izay. Ny fitaovana milina fanaovana hazo tranainy indrindra voarakitra amin'ny tantaran'ny raharaham-bahiny dia ny lohan'ny tsipika nataon'ny Egyptianina tamin'ny taona BC Ny masinina fanodinana tany am-boalohany, izay nipoitra tany Eoropa tamin'ny taona 1384 niaraka tamin'ny herin'ny rano, ny herin'ny biby ary ny herin'ny rivotra mba handroahana ilay tsofa tsofa amin'ny fihetsika mamaly. ny vatan-kazo, dia fampiroboroboana ny fitaovana milina fanaovana hazo.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-18 dia teraka tany Angletera ny milina fanaovana hazo maoderina, ary tamin'ny taona 1860 dia nanomboka ny "Revolisiona indostrialy" tany Angletera, miaraka amin'ny fandrosoana lehibe eo amin'ny teknolojia famokarana milina, ary ny fiankinan-doha amin'ny asa tanana amin'ny sehatry ny indostria nahatratra fanodinana mekanika. Ny Woodworking dia nanararaotra an'io fotoana io hanombohana ny fizotran'ny mekanisialy. Ny zava-bitan'i S. Benthem, injenieran'ny fanamboaran-tsambo anglisy izay fantatra amin'ny anarana hoe "rain'ny milina fanaovana hazo", no malaza indrindra. Nanomboka tamin'ny 1791 dia namorona ny planer fisaka izy, ny milina fikosoham-bary, ny masinina misy lavaka, ny tsofa boribory ary ny milina fandavahana. Na dia mbola tsy namboarina ratsy tamin'ny hazo aza ireo masinina ireo ho tena vatan'olombelona ary ny fitaovana sy ny bearings ihany no vita tamin'ny vy, dia naneho fahombiazana lehibe izany raha ampitahaina amin'ny asa tanana.
Tamin'ny 1799, MI Bruner dia namorona milina fanaovana hazo ho an'ny indostrian'ny fanamboaran-tsambo, izay nahatonga ny fitomboan'ny fahombiazany. 1802 dia nahita ny foronin'ny planista gantry nataon'ny lehilahy anglisy Bramah. Izy io dia nahitana ny fanamboarana ireo akora ampiasaina eo ambony latabatra, miaraka amin'ilay antsy planina mihodina eo ambonin'ilay sangan'asa sy ny fandrafetana ny sanganasan'ny hazo rehefa mihetsika mifandimby ilay latabatra.
Tamin'ny 1808, ilay anglisy anglisy William Newbury dia namorona ilay planeta gantry. Namorona ny tsofa tarika i Williams Newberry. Na izany aza, ny tsofa tarika dia tsy napetraka noho ny haavo ambany noho ny haitao misy amin'izao fotoana izao amin'ny fanaovana sy fantsom-boaloboka. Tany amin'ny 50 taona taty aoriana vao vita lafatra ny teknikan'ny lasitra tariby lasantsy ary nanjary nahazatra ny tsofa.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-19, ny fampandrosoana ara-toekarena amerikana, mpifindra monina eropeana marobe nifindra tany Etazonia, ny filàna fananganana trano, fiara sy sambo marobe, miampy ny Etazonia manana loharanon-karena manan-karena amin'ity toe-javatra tokana ity , ny fisondrotan'ny indostrian'ny fanodinana hazo, ny fitaovana milina fanaovana hazo dia novolavolaina betsaka. 1828, Woodworth (Woodworth) dia namorona planer an'ny mpanao gazety tokana, ny rafiny dia vatan'ny planer rotary sy roller roller feeder Ny feeder roller dia tsy vitan'ny hoe mamahana ny kitay fotsiny fa koa mampitafy, mamela ny hazo hametahana azy ireo araka ny hateviny. Tamin'ny 1860 dia nosoloina vy fandriana ilay fandriana hazo.
Tamin'ny 1834, George Page, Amerikanina, no namorona ilay mpandrafitra hazo. George Page no namorona ny milina fanadiovan-tongotra sy ny lozisialy an-tongotra; JA Fag dia namorona ny milina fanadiovana sy ny mikraoba; Greenlee no namorona ny milina famonoana am-boaloboka sy milina fitetezana voalohany indrindra tamin'ny 1876; ny sander fehikibo voalohany dia niseho tamin'ny 1877 tao amin'ny orinasa amerikanina any Berlin.
Tamin'ny taona 1900, nanomboka namokatra tsofa tsofa roa i Etazonia.
Tamin'ny 1958, ny USA dia naneho fitaovana milina CNC, ary 10 taona taty aoriana, UK sy Japan dia namolavola milina fanamboaran-trano vita amin'ny hazo CNC tsirairay.
Tamin'ny 1960, Etazonia no voalohany nahavita hazo vita amin'ny hazo mitambatra.
Tamin'ny 1979, ny sainam-pirenena Alemana manga (Leits) dia nanao fitaovana diamondra polycrystalline, ny fiainany dia 125 heny noho ny fitaovana karbida, azo ampiasaina amin'ny tabilaon'ny zana-kazo melamine veneer, tabilao ary fanodinana trondro. Tao anatin'izay 20 taona lasa izay, niaraka tamin'ny fampivoarana ny teknolojia elektronika sy ny teknolojia CNC, ny fitaovana milina fanaovana kitay hazo dia mampiasa teknolojia vaovao hatrany. 1966, orinasa Sweden Sweden Kockum (Kockums) no nanangana ny zavamaniry vita amin'ny hazo mandeha ho azy voalohany mifehy ny solosaina. 1982, ny orinasa British Wadkin (Wadkin) dia nanamboatra milina fanodinana CNC sy ivon-toeram-pamokarana CNC; Ny orinasa Italia SCM dia namolavola rafitra fanodinana milina fanodinana fitaovana vita amin'ny hazo. Tamin'ny 1994, ny orinasa italianina SCM sy ny orinasa alemà HOMAG dia nanangana tsipika famokarana malefaka ho an'ny fanaka ao an-dakozia ary tsipika famokarana malefaka ho an'ny fanaka birao.
Nanomboka tamin'ny famoronana ny maotera misy etona mandrapahatongan'ny fotoana maherin'ny 200 taona mahery, ny indostrian'ny fitaovana milina fanaovana hazo any amin'ny firenena mandroso, amin'ny alàlan'ny fanatsarana, fanatsarana, fahalavorariana, dia lasa andiany 120 mahery. karazany 300 mahery, lasa indostria feno. Ireo firenena sy faritra mandroso kokoa dia ny milina fanaovana asa-tany: Allemà, Italie, Etazonia, Japan, France, Britain and Taiwan Province of China.
Satria nampijalian'ny imperialisma i Sina tamin'ny andro maoderina, ny governemanta Qing mpanao kolikoly dia nametraka politika mihidy, izay mametra ny fampandrosoana ny indostrian'ny milina. Taorian'ny 1950, ny indostrian'ny fitaovana milina fanaovana kitay any Sina dia nivelatra haingana. 40 taona, Shina dia naka tahaka, fakana sarintany hatramin'ny famolavolana sy fanamboarana milina fanaovana hazo. Ankehitriny dia misy andiany maherin'ny 40, karazany mihoatra ny 100, ary namorona rafitra indostrialy ao anatin'izany ny famolavolana, ny famokarana ary ny fikarohana siantifika sy ny fampandrosoana.